Thursday May 11, 2017 - 14:36:59 in Wararka by
Mahadda eebbe kadib Maalmahan waxa aad loo hadal hayaa wax loogu yeedhay shirkii lagaga hadlayay arimaha soomaalida kaas oo ay kasoo qayb galeen afartan dawladood oo daneeya arrimaha Soomaalida, Waana shirkii sadexaad oo dawladda gumeysiga ingiriisk
hadaba ma dhabbaa in ingiriisku dawlad u dhisayo soomaalida? Jawaabta oo gaaban taariikhda ayaa ina Tusaysa, ingiriisku wuxuu dhulka ay dagaan Tolalka soomaalidu soo galey iyagoo haybad iyo sharaf leh wuxuu heshiis maqaar saar ah la saxeexday odayaal dhaqameedyo iyo madax markaas ka talinaya dhulka soomalida markii danbena uu kaga baxay oo dhulkoodii uu ku wareejiyay cadawgoodii.
Ingiriisku waa gaal,Gaalna ninka indheer garadka ah waxaa ugu filan cibro intuu quraanku ka sheegay,Ninkii intaad waxba ku qaadan waayo waxaa cibro ugu filan waaqaca. Waxa jirtey sheeko yaab badan oo laga weriyay Abwaan xaaji aadan afqallooc isagoo maalin ka khudbadaynaya magaalada berbera ee xeebta batalaale ayuu soomaalidii joogtey ku yidhi weydinkii dhintaye hadmaa soo noolaateen isagoo uga jeeda sheekadan”Ingiriisku markii uu yimid dhulka soomaalida sida badan waxa u shaqayn jirey Hindi fara badan oo uu soo kaxaystay Somaliduna ay u yaqaaneen baaniyaallo.
Hindidii ingiriisku soo kaxaystey oo Lo&apos; caabud u badnaa waxay dhibsadeen soomaalidan hilibka lo’da cunaysa,kadibna waxay u tageen Maamulkii ingiriiska oo ay ku yidhaahdeen "somaalidu ilaahayagii ayay cunayaan ee hanalaga qabto” Gaalkii ingiriisna wuxuu u sheegay inay iska celiyaan,maalintii danbe waxa dhacdey in wiilyar oo soomaali ahi uu lug hilib lo’aad ah isagoo sita uu lasoo marey suuq ay Hindidu u badnaayeen Markaas bay hindidiina faash ku jarjareen wiilkii dadkii falkaas geystey lama ciqaabin ingiriisna waxba ma odhan balse AHUN wiilkaa yar shahiidka ah.
Waakaas ingiriiska aad cadaalad ka rabtaan oo Mahdiga u haysataan (Shirka London). Gaalka gaalada ugu xumi waa ingiriis oo munaafaqa gaalada ah kuwaas oo 1948 jigjiga ku sumeeyay Halgame faarax oomaar isla sanadkaasna waa kuwii diley sheekh bashiir iyo xertiisii Waa kuwii Sheekh makhtal daahir u dhiibey Talyaaniga waana isla kuwii intey heshiis la galeen Oo hubka ka ururiyeen magaaladii somaaliyeed ee harer Hadana heshiiskii ka baxay oo xabashida kusoo hubeeyay heer masaajiddii kaniisado loo bedelay.
Kolley talyaanigu lama mid ahayn oo isagoo dadka laynaya oo webiyada kaga dul talaabaya hadana khiyaamooyinkaas oo kale Ma sameyn....Somalida waqooyi wixii ay sida bila shuruudda ah ugu biireen koonfurna waxay ahayd iyaga oo ka baqayey in ingiriiska oo dhul badan bixiyey hadana uu iyaga xabashida ku wareejiyo waana taariikh aad loo qariyo oo aan shacabka la maqashiin. Markasta Ogow gaalku inuu gaal yahay balse isku mid ma ahan cudurka qaaxada iyo kanserku haddii lagu kala dooran siiyona kolley TP-du waa ka sahlan tahay kansarka,,waana sida aaney iskugu mid u ahayn Fircoonkii qarniga ee Bush kaas oo si cad u sheegay in dawladaha dunidu ay labo yihiin "every nation in every region either you are with us or with the terrorist” iyo laba wajiile Obama oo Masar uga khudbadeeyay sidii oo uu muslim yahay dharka somalidana xidhay si shacabka muslimiinta ah irbad suuxiso ah loogu mudo.
Inkasta oo hadda dadka nooli ay yihiin dad hogashada aqbalay ereyada kaliya oo lagu cabiri karaa waa ereyadan uu tiriyey xaaji aadan afqallooc xilligii gumeystaha.
•Iglan iyo talyanaad sidii,nabi adeecdeen
•Idinna sida aboorkiyo tukaha,yeysu aragtaan
•wax addoomo laydiinka dhigey,uumiyaha kale
•Hadba kii ajnabiyoo yimaa,daba ordaysaan
•Ma aqbalo sharcigu caynkanoo,waa anfiyayaaye
•Miyaydaan aqoon diinta waad,ku andacootaane
Mujaahid sayid Maxamed oo la yaabanaa sida somaalida badankeed jabkiisa ugu faraxsan tahay ayaa la dardaarmey oo u sheegay in gaalku aanu kala jeclayn iyaga iyo isaga balse midba maruun uu cunayo
•Waa wada damiin aan kasayn,dabinka hoosyaale
•Waa niman daboolmoo qalbiga, daabac kaga yaale
•Dib wixii u dhici waa waxaan, dooc ka garanayne
•Doqonimo darteed waa wixii, iigu diirsadaye
•Waa wixii dabaaldegay anuu, gaal isoo dilaye
•Waa wixii durbaansanahayeen ii, dub nixi hayne
•Xadhkaheer u daadsane misana, ciidda lagu duugay
•Oo doora weynow kufrigu, dul uga saynsaabay
•Markaan dunida dhaafaa walee, lagu dabaayaaye
•Igu diima aa ama dafirid,igula doodaaba
•Waxaad iga danbaysaanba waa,dayrtan maanta ah e
maxay igaga digan saadambuu,siin lasoo degiye !!
islamarkii uu sayidku dhintayba waxa gaaladii gumaysigu ay ku qamaameen boqoradii yaryaraa ee gumaysiga heshiiska la seexeexday sida boqor cismaan,suldaan yuusuf keenadiid iyo garaad maxamuud cali shire.Ugu danbayn hadii qabiil lagu faano,maamul goboleedyo iyo gaalo lasoo kaxaystaa wax tarayso muslimiintu may lumiyeen Andalus oo ay 800 oo sano ka talinayeen, AMISOM waxay tarto aynu eegno.
W/Q :Guuleed Maxamed